चिन्तन चौतारी: October 2009
Posted by Chandra Magar at 6:17:00 PM No comments:
प्रजातन्त्र भलिबल भो
गणतन्त्र त क्रिकेट भो ।
उपाधीको दावेदारी बराबरी झै हुने
छल गरेर श्रिपेच लगाउने खेल हो यो
स्वार्थी चाल चालेर धनाध्य बन्ने दाउ हो यो
जालझेल गरेर कुर्चि कब्जा गर्ने सजिलो खेल हो यो ।
प्रजातन्त्रमा नेट छुदा पनि
लगातार नम्बर आएर जित हुन्छ
लोकतन्त्रमा हातले खेलेर नै
ह्याट्रिकको नि हाट्रिक गोल नै गोल हुन्छ
गणतन्त्रमा मिडल स्टम्प दलेर पनि
छक्का हिर्काएर बिजयी हुन्छ ।
नेपालको चौरमा केवल
प्रतिष्पर्धा जित्नुछ सवैलाई
कुनै आचारसंहिता मान्नै नपर्ने
राजनैतिक यो कुर्सी खेल
कुनै नियम लागु नहुने
हाम्रा राजनेता खेलाडीहरु
अनुशासन पालना गर्नै नपर्ने
बिचित्रको यो कस्तो खेल!?
जित्नछ, सिर्फ जित्नुछ ।
बधाई छ! यि महान हस्तिहरुलाई
राष्ट्रका स्वघोषित नयाँ बिभुतिहरुलाई
देशका यि ऐतिहासिक खेलाडीहरुलाई
अब चाडै सम्मानको घोषणा गरौ
बरु गिनिज बुकमा नाम लेख्नलाई
दुकुती रित्याएर बिशेष पहल थालौ
जय! हाम्रा खेलाडी
जय! हाम्रा नेता
जय! नेपाली जनता ।
Posted by Chandra Magar at 6:07:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 7:48:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 10:32:00 AM No comments:
तिहारमा माइत जान, दिदी औंला भाच्दै होलिन ।
मनका कुरा मेलापातमा, सङीसँग साट्दै होलिन ।
भाइको लागि माला भनी, फूलहरु उन्दा उन्दै
प्रदेशी यो भाइको चिठ्ठी, दोहोर्याएर पढ्दै होलिन ।
सयपत्री, मखमली र, जमरा'नि छरिन रे
ओइलिएको फूल हेर्दै, आसुँ धारा झार्दै होलिन ।
बर्षभरी भाइ आउने, निकै आशा गर्दै थिइन् रे
खाली खाली आँगन देख्दा, बेस्सरी दुख्दै होलिन ।
पिडा थप्दा भाईटिकाले, पोहोर झै यो साल पनि
सधैंभरी आफ्नै भाग्य, खोतैखोत सोच्दै होलिन ।
उज्यालो त्यो जन्मघर, अन्धकार देखे पछी
हाँस्दै हाँस्दै आउने दिदी, रुदै रुदै फिर्दै होलिन ।
Posted by Chandra Magar at 5:01:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 6:22:00 PM2comments:
भरिपूर्ण मेरो जंकोट, किन अचेल खाली भा'छ ।
शान्तिको गीत गाउदा'नि, दुनियाको गाली पा'छ ।
थरी थरिका फूल फुलाउने, सिपालु माली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, खडेरीको वाली भा'छ ।
अस्तीसम्म ओत लाग्ने, अप्ठ्यारोको पाली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, फोहोर फाल्ने नाली भा'छ ।
आफ्नो-पराइ सबै चिन्ने, अरुको सधैं ताली पा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, च्यातिएको चाल्नी भा'छ ।
कवच बनी बाण छल्ने, रुखको डाली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, शिकारीको थाली भा'छ ।
जीवन मरणको धरापमा, न्यायको मुली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, असत्यको फुली भा'छ ।
खुनै खुनको कुलो बग्दा, खेतालाको फाली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, जमिन्दारको हली भा'छ ।
मेरै गीत देश बिउझाउने, समानताको चाली भा'थ्यो
अचेल किन मेरो जंकोट, मुखियाको जाली भा'छ ।
शान्तिको गीत गाउदा पनि, दुनियाको गाली पा'छ ।
13 Oct, '09
Posted by Chandra Magar at 9:11:00 AM No comments:
Posted by Chandra Magar at 6:26:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 6:13:00 PM No comments: